Posted by Tranquillus | Déc 13, 2021 | Shabakada
Ma xiisaynaysaa waraabka? Ma doonaysaa in aad fahanto caqabadaheeda, farsamooyinkeeda? Koorsadan, saddex macalin ayaa ku baraya fikradaha aasaasiga ah ee waraabka iyadoo loo marayo muuqaalo iyo jimicsiyo. Si joogto ah, waraysiyada lala yeesho jilayaasha goobta ayaa u oggolaan doona fikradahan in la geliyo qaab wax ku ool ah.
Kooraskan waxa loo habeeyey 6 qaybood (hal todobaadkii). Su'aalaha iyo waxqabadyadu waxay kuu oggolaanayaan inaad tijaabiso aqoontaada.
Kooraskan waxa loogu talagalay ardayda jaamacaddaha iyo masters-ka ee xiiseeya cilmiga deegaanka, laakiin sidoo kale beeralayda, wakiilada dawladda iyo la-taliyayaasha dhinaca maaraynta khayraadka biyaha iyo waraabka. Waxaan ku bilaabeynaa aasaaska, markaa ma jiraan wax shuruudo ah oo lagama maarmaan u ah qaadashada MOOC-gan.
Farsamooyinka waraabka Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Bilaash ah: Sideen u isticmaalaa aaladda Excel ee 'Go To tool'?
socdaHaweenka iyo miyiga Yurub